Mon, Jul 16, 2018 | 12:20:58 NST
19:25 PM ( 8 months ago )
त्यसैले स्थानीय तहको चुनावमा उत्साहजनक रुपमा सहभागी भएका नागरिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई पनि उत्तिकै उत्सवको रुपमा मनाउन तयार छन् । तर शीर्ष नेता र उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै ठाउँठाउँमा दिनहुँजसो भैरहेका बम विष्फोटका घटनाले धेरैलाई आतंकित बनाएको छ ।
बम विष्फोटका घटनामा कसैले जिम्मेवारी नलिए पनि यो काम नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । स्थानीय चुनावको बेला पनि नेकपाले ठाउँठाउँमा अवरोध गर्न खोजेको थियो । तर त्योबेला यति धेरै आतंक छाएको थिएन । यसपटक त उम्मेदवारको ज्यानै लिन खोजेजस्तो गरी बम विष्फोटका घटना भएका छन् ।
भोट माग्न जाँदा विष्फोटमा परेका नेताहरु अहिलेसम्म सुरक्षित छन्, तर कार्यकर्ता र सर्वसाधारण नागरिक घाइते भएका छन् ।
भोट माग्न हिँडेका नेताहरुमाथि बम पड्काएर नेकपाका कार्यकर्ताले कसैको ज्यान नै लिन खोजेका हुन् या तर्साउन मात्र ? चुनाव भाँड्न खोज्नेहरुलाई बल पुग्नेगरी यस्ता घटना गराएर उनीहरु के चाहन्छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।
कसैको ज्यानै लिन खोज्नेगरी भैरहेका बम विष्फोटका घटना राजनीतिक क्रियाकलाप होइनन्, यो त आतंक फैलाउने काम हो । आतंक फैलाउनेहरु नागरिकको नजरमा कहिल्यै सफल हुँदैनन् ।
चार वर्षअघि यहीबेला २०७० को मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भैरहँदा मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको पार्टीले पनि यस्तै घटना गराएका थियो । तर नेता, कार्यकर्ता र नागरिकलाई नै निशाना बनाएर बम कमै मात्र पड्केका थिए । त्यतिबेला वैद्यको पार्टीमा विप्लव पनि सँगै थिए । अहिले वैद्य र विप्लवको बाटो फरक भएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा चुनाव भाँड्न खोज्ने वैद्य नेतृत्वको पार्टी यतिबेला चुनावमा सहभागी भएको छ । हिंसा र आतंकले नागरिकको मन जित्न सकिँदैन भन्ने बुझेर नै वैद्य नेतृत्वको पार्टी चुनावमा सहभागी भएको हो । त्यसो त १० वर्ष सशस्त्र बिद्रोहमा लागेको मूल माओवादी नै यतिबेला शान्तिपूर्ण र दलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नागरिकको मत लिएर स्थायी सरकार बनाउने लक्ष्यसहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई लगायत विप्लवका अगुवाहरुले हिंसात्मक बाटो छाडिसके । बम र बन्दुकबाट होइन ‘ब्यालेट’ बाट नागरिकको मत र मन जित्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई सबैले स्वीकार गरिसके । तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यो यथार्थलाई बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ ।
चुनावको मुखमा बम पड्काएर आतंक फैलाउन त सकिएला, तर नागरिकको मन जित्न कदापी सकिँदैन । संक्रमणकालको नाममा देशमा सधैँभरी अशान्ति र अस्थिरता भैरहँदा आमनागरिक निराश छन् । देशले विकासको फड्को मार्न सकेको छैन । संविधान बनिसकेपछि अब देशमा विकासले गति लिएको हेर्न नागरिक उत्सुक छन् । चुनाव सफल भयो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास निर्माणको कामले गति लिन्छ । यही आशामा नागरिक चुनावलाई उत्सवको रुपमा मनाउन तयार भएका हुन् ।
आमनागरिकको यो उत्साह र आशालाई सम्मान गर्नु सबै राजनीतिक दलको दायित्व हो । देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेको विप्लवको पार्टीले यो कुरा राम्ररी बुझेकै हुनुपर्छ । नागरिकको नजरमा सफल हुने हो भने आजैदेखि बम विष्फोटका घटना रोकिनुपर्छ ।
देशभर चुनावी चहलपहल बढिरहेको बेला आम नागरिक, उम्मेदवार तथा दलका नेता कार्यकर्तालाई ढुक्क हुने वातावरण बनाउन सरकार पनि असफल भएको छ । गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुबाहेक सुरक्षाको भरपर्दो योजना बनाउन सकेका छैनन् । सम्भावित घटनाको पूर्व सूचना संकलन गर्न सुरक्षा निकाय असफल जस्तै भएको छ ।
विप्लवका कार्यकर्ताले नागरिकको भावना बुझेर चुनाव विरोधी गतिविधि छोडे भने पनि अर्को कुनै समूहले यस्तै क्रियाकलाप दोहोर्याउन सक्छ । चुनावको बेला हुन सक्ने सम्भावित घटना रोक्न सुरक्षा निकाय जति चनाखो हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । नेता कार्यकर्तासँगै आमनागरिकलाई चुनावी चहलपहलले छोइसकेको बेला शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने काम सरकारकै हो ।